Macalin Ole Gunnar Solskjær oo xaqiijiyay in Ashley Young uu baxay – Gool FM
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo xaqiijiyay in Ashley Young uu baxay
(Manchester) 17 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ku dhawaaqay bixitaanka Ashley Young isla markaana uu ku biiray naadiga Inter Milan.
Ole Gunnar Solskjær ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta oo Jimco ah wuxuu shaaca kaga qaaday in Ashley Young uu qarka u saaran yahay inuu dhameystiro heshiiska uu ugu biirayo kooxda Inter Milan, kaddib markii la dhameystiray howlgalka heshiiska uu ku baxayo.
Wararka qaar ayaa waxay shaaca ka qaadeen shalay oo khamiis ah in kooxaha Manchester United iyo Inter Milan ay ku heshiiyeen qiimo ku kacaya 1.5 milyan euro, iyadoo Ashley Young uu tijaabada caafimaadka ku marayo magalaada Milan isla markaana uu saxiixi doono heshiis cusub.
34 jirkan ayaa yimid kooxda Manchester United sanadkii 2011, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay naadiga Aston Villa, isagoo ciyaaray 261 kulan ee ah dhamaan tartamada, 19 gool ayuu u dhaliyay Red devils, wuxuuna kula guuleystay koobab badan.
Macalin Ole Gunnar Solskjær ayaa u sheegay Website-ka kooxda:
“Sidaad ka war qabtaan Ashley Young wuxuu noqon doonaa 35 jir xagaagan, haddii uu qandaraas labo sano ku helo meel kale, waxaan u maleynayaa inay isaga ku xiran tahay taas, anagu diyaar uma aheyn inaan u soo bandhigno”.
Si kastba ha noqotee wararka qaar ayaa waxay xaqiijinayaan in Ashley Young uu ka dagay magaalada Milan, si uu dhameytiro heshiiska uu ugu biirayo kooxda Inter Milan.
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha December ee kooxda Juventus oo lagu dhawaaqay